Shabaabka Baraawe Oo markan Xaaladu KuxunTahay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shabaabka Baraawe Oo markan Xaaladu KuxunTahay
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom, ayaa wado dhaq-dhaqaaq ciidan oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan Degmada Baraawe oo ah xarun muhiim u ah dagaalamayaasha Shabaab ee ku sugan Gobolka Shabeellaha hoose.
Wararka laga helaayo Gobolkaasi Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada Huwanta ay u ruqaansadeen shalay galab wadada aada dhanka Degmada Baraawe, iyaga oo ka ambabaxay xoogooda Degmada Buulo mareer oo kamid ah deeganadii ugu dambeeyay ee Gobolkaasi ka tirsan oo gacanta ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom soo gashay.
Warbaahinta Dowladda ayaa laga baahiyay in ciidamada ay gaareen tuulo lagu magacaabo Maryan-gubaay oo ku dhaw Magaalada Baraawe, balse ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada ay joogaan dhul ka fog Baraawe qiyaastiina u jira ilaa 60-KM.
Saraakiil ka tirsan kuwa Xooga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha uu yahay inay qabsadaan Degmada Baraawe oo ah Saldhig weyn oo Mucaaradka Shabaab ay ku xoogan yihiin, ayna adag tahay sida lagu qabsado.
Sida Aywarbaahinta Wardoon.net Xogta Kuhelayso Xoogaga Midowga Afrika ee Amisom ayaa waxa ay wataan gaadiid fara badan oo nooca dagaalka ah, waxa ayna iyaga oo badan ka baxeen Degmada Buulo mareer, sida laga soo xigtay dadka deegaanka Buulo mareer oo arkaayay taangiyada iyo dabaabaadka Amisom.
Guddoomiyaha Degmada Qoryooleey Cismaan Gaagaale ayaa horay usheegay in bilowga Bishaan uu bilaabanaayo wajiga labaad ee howlgalka Badweynta Indiya, kaasi oo qeybtiisa hore lagu xureynaayo Degmada Baraawe, waxaana dagaalkaasi ka qaybqaadanaayo sida Guddoomiyaha uu sheegay Diyaaradaha dagaalka.
Ciidamada Huwanta ayaa shalay la wareegay deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe, hadana dhaq-dhaqaaq culus oo Baraawe ku wajahan ayeey ka wadaan deeganada udhaxeeya Buulo Mareer iyo Baraawe.